Chinhu ndakacherechedza achiri yunivhesiti yaiva uwandu vanhu ndaiziva kutenga uye / kana nemafungiro dzinovaraidza. Ndaiva neshamwari uye neshamwari vakanga pakuwana mhando dzinovaraidza zvose zvakasiyana mumakore avo post-yechipiri dzidzo-katsi, imbwa, shiri, hove, tsuro, hedgehogs uye kunyange muhari dumbu nguruve.
Inogona sokuti zvikuru anoedza kumhanya panze uye kuwana chipfuwo asi uri kufunga kuzvipira kuti unouya pamwe chipfuwo? Ehe, dzinovaraidza hwako norudo iwe mirawo uye ipapo imi munguva yose mukuru uye neyakaoma muupenyu, asi vanoita zvinoda vakasvimha hanya. Heino mazano mashoma kukubatsira kusarudza kana wagadzirira:
Pets vari kuzvipira zvemari
Vamwe dzinovaraidza zvinogona yakaderera mutengo vamwe dzinovaraidza vanogona kutanga yakaderera mari asi zvishoma nezvishoma mari iwe duku mhanza uye. Kwemakore, imbwa yangu akanga zvakaenzana nyore yokuzvigadzirisa. Ndiye duku imbwa, saka chikafu chake yaunodya yaiva duku uye kashoma aifanira kushanyira Vet. zvisinei, iye akapotsa 15 uye ikozvino vakwegura uye vanorwara. mishonga ake arasikirwe ruoko uye gumbo ose mwedzi. Kufanana vanhu, mhuka vanorwara pasinei nezera kana mararamiro. Unogona kutenga kuti goko vachibudisa mari, uyewo nguva yenyu dzinovaraidza? Ichi chinhu chinoda huchakurukurwa.
Pets muri nguva kuzvipira
Nepo vamwe dzinovaraidza vanonzi "pasi Nokuraramisa" vachiri vanoda nguva akaita kwavari zuva nezuva. kudyisa, nokushambidzika muviri zvishomanana zvinhu kufunga kana totaura nezuva kutarisirwa chipfuwo. Kana uchiramba kufamba kana kupedza nguva yakawanda kuchikoro kana kubasa zvino kumba, kuti uve pfungwa yakanaka asingapindiri kuwana chipfuwo kuti nguva yokuva. Inogona kuva mutoro kune vamwe kana uchiramba achivakumbira kupuruzira-kugara zvipfuwo zvenyu uchiri kure. Zvimwe kana upenyu hwako hunowedzera akagadzirisa yaizova mukuru nguva kuwana chipfuwo.
Pets vari kuzvipira kwenguva refu
Nepo inovaraidza kunogona kukodzera mararamiro ako izvozvi, havazodyari gore rinouya? mu 5 makore? mu 10 makore? Ndinonzwisisa chido kuwana chipfuwo, asi kubvuma kuti mhuka vari kuzvipira kwenguva refu kunodiwa. vanhu vakawanda Ndinoziva vakanga dzinovaraidza vaifanira muvarege paye mumugwagwa nokuti vakanga vasisa hanya navo. Vaiva kuti mhuka apo kuchikoro asi kamwe ivo kudzidza uye takatamira kuguta idzva kana furati kukwanisa kutora dzinovaraidza avo. Hazvina chisarudzo hapana anoda kuita, ndine kupatsanura pamwe yainge wavo anodiwa, kana kwenguva duku kana zvachose. Zvakafanana nguva kuzvipira, zvichida unofanira kumirira kusvikira hwako zvishoma shinaira.
Saka usati kubuda uye vave chipfuwo, tsvakurudza rako uye kufunga nezvourongwa yako yeramangwana. Kutarisa mhando hwechipfuwo yaunoda, chii chinodiwa kuti zvakakodzera vanovatarisira uye kana avo zvinodiwa kukwanawo wako mararamiro kuitika. Hapana chakaipa nokunonoka kuwana chipfuwo kusvikira yenyu wakagadzirira, saka regai kumhanyira chisarudzo.
Ko Women Want muna Man Ravo Perfect?